UKhune uthandazela uSbahle
USBAHLE Mpisane obehamba ngemoto yakhe iBMW 4 Series Convertible
KUBIKWA ukuthi usephumile egunjini labagula kakhulu (ICU) esibhedlela uSbahle Mpisane obe sengozini yemoto entathakusa ngoLwesine.
USbahle, ozakhele udumo ngokujimisa abantu, ubehamba ngemoto yakhe iBMW 4 Series Convertible ngesikhathi ehlelwa yingozi emgwaqweni uMargaret Mncadi Avenue (Victoria Embankment).
Umthombo weSolezwe uthe kusolwa ukuthi ubevika umuntu obewela umgwaqo wahluleka ukulawula imoto. Kusolwa ukuthi imoto ibihamba ngesivinini esiphezulu njengoba ishayise yaphela. Omunye umthombo weSolezwe uthe ubephuma endaweni yobumnandi iWarehouse, ngaseNkosi Albert Luthuli Convention Centre, lapho bekunomcimbi khona obizwa ngeWine Wednesdays oba njalo ngoLwesithathu. Kwenzeka le ngozi nje kusolwa ukuthi ubesebheke ekhaya eYellowwood Park.
Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbele, uthe ingozi yenzeke ngabo-4.20 ekuseni.
“Kusolakala ukuthi imoto ishayise yase iyavutha kuVictoria Embankment maqondana naseMtateni, kanti kusetshenziswe izindlawu ukumkhipha emotweni. Ubelimele wabe eseyiswa esibhedlela ukuze ayolwashwa,” kusho uCol Mbele.
IZINSALELA zemoto BMW 4 Series Convertible kaSbahle Mpisane ngemuva kwengozi eyenzeke ezintatha izolo eThekwini Isithombe: FACEBOOK
Uyise kaSbahle, uMnuz Sbu Mpisane, uthe akakwazi ukukhuluma ngoba usegunjini labagula kakhulu esibhedlela esiseThekwini leli phephandaba elinalo igama laso.
“Usesimeni esibucayi. Angazi lutho ukuthi kwenzakaleni ngoba umuntu obengachaza nguye manje akakwazi ukukhuluma,” kusho uMpisane.
UCol Mbele uthe imbangela yengozi ayikaziwa okwamanje.
“Kuvulwe icala lokushayela budedengu esiteshini samaphoyisa eDurban Central. Iyaphenywa imbangela yengozi,” kusho uCol Mbele.
Abantu abaningi bamfisele ukululama ezinkundleni zokuxhumana. Isoka lakhe elingunozinti weKaizer Chiefs, u-Itumeleng Khune, lithe usemthandazweni. Okhulumela iqembu le-EFF uDkt Mbuyiseni Ndlozi uthe bazombeka emthandazweni. Abantu bamfisela ukululama ngaphansi komkhankaso othi #prayforsbahle.
NgoMgqibelo uKhune ubengekho emdlalweni weChiefs neFree State Stars lapho leli qembu linqobe khona ngo 3 - 0